Kodi ndomumwe wevatambi vemidhiya vane simba vakamboburitswa Windows - uye ndeimwe yezvinonetsa.
Shandisa yazvino 'Krypton' vhezheni yeKodi
Simbisa mavhidhiyo ako, mimhanzi uye mafoto
Wedzera zvinhu zveKodi uchishandisa ma-add-ons
Shandura zvaunogona kufambisa uchishandisa yakajairwa kuvaka
Zvirongwa zvishoma mumakore achangopfuura zvakaratidza kuti zvine gakava - kana kuti zvakakurumbira - seKodi. Pane imwe nhanho imhanzi inopenya uye vhidhiyo inoridza, ichikuita kuti ufambise zvirimo pakati pemakomputa. Kana ukabatanidza laptop yako kuTV yako netambo yeHDMI unozokwanisawo kuwana nekuona zvese pachiratidziro chikuru cheterevhizheni yako.
Kodi - inozivikanwa seXBMC kusvika 2014 - zvakare inokunda pakutepfenyura pamhepo. Iyo inokupa iwe kuwana kune ese marudzi ezvekuwedzera ayo anowedzera ayo ekutanga maficha, saka iwe unogona kuona YouTube, iPlayer, kunze-kwe-copyright mafirimu uye ruzhinji rwezvimwe zvemukati zvevhidhiyo zvakananga kubva kune imwe nzvimbo iri nyore. Uye zvakare, iwe unogona kuteerera kumazana eredhiyo kubva kutenderera pasirese, tarisa mafoto ako ese uye kuyerera podcasts.
Vashandisi vepamberi vanofanirwa kufunga kuisa tsika inovaka kushandura maficha eKodi. Izvi zvinowedzera dzimwe nzira dzekutarisa nekuteerera kune zvako zvirimo.
Zvose izvi zviri pamutemo zvakakwana. Asi vamwe vanogadzira vakagadzira ma-add-on ayo anoita kuti vashandisi vatepfenyure zvinhu zvine kodzero, zvakaita semafirimu, zviratidzo zveTV uye kunyange kutepfenyura kwemitambo yenhabvu. Vabati vekodzero havasi kufara. Chokwadi, FA iri kuongorora kuti ingashandise sei masimba matsva akapihwa neDare Repamusoro kuvharisa hova dzisiri pamutemo. Kodi pachayo iri kuronga danho repamutemo kurwisa vanhu vanotengesa mabhokisi eTV ane software isati yaiswa, uye mapurisa ari kupaza zvakare. Muna Kukadzi vakasunga vanhu vashanu vaitengesa mabhokisi eKodi.
Iwe haugone kuwana mazano ekuti ungatenga kupi mabhokisi aya mune ino chimiro. Asi isu tiri kutarisa pane izvo Kodi yakavakirwa pakutanga - kuronga uye kuona mafaera ako emidhiya, uye kuwana zviri pamutemo zvekuona online. Verenga uye tichatsanangura nzira yekuisa nekushandisa iyo yazvino vhezheni yeKodi (inonzi Krypton) uye maitiro ekuwedzera ako ese mavhidhiyo, mimhanzi uye mafoto. Isu ticharatidzawo edu atinoda ma-add-ons, uye totsanangura maitiro ekuisa Apollo, imwe yeakanakisa tsika yeKodi inovaka. Zvese zvaunoda kuti uite kugara kumashure, dzvanya play uye unakirwe.
INSTALL & GADZIRA KODI
Isa Kodi pa Windows
Your Windows PC ndeimwe yezvishandiso zviri nyore kuisa Kodi pa. Chekutanga, enda ku www.kodi.tv/download uye skira pasi kuchikamu che 'Chazvino kuburitswa' (Kodi v17.1 panguva yekunyora). Dzvanya iyo RC: Installer link pazasi pe Windows logo yekurodha Kodi kune komputa yako (ona skrini kurudyi). Tinya kaviri faira rakadhaunirodwa kuti utange kugadzika. Iwe uchaona pop-up bhokisi richibvunza kana iwe uchida kumhanyisa chirongwa - tinya Hongu kuti uenderere mberi. Dzvanya Inotevera, Ndinobvuma, uye iwe uchapihwa sarudzo yekuti ndeapi zvikamu zveKodi zvaunoda kuisa. Isu tinokurudzira kuaisa ese kuti akupe iwe ruzivo rwakanyanya. Dzvanya Next, sarudza yekuisa folda uye tinya Next, wozoisa kupedzisa maitiro.
Cherechedza: Windows 10 vashandisi vanogona zvakare kuisa Kodi seapp. Enda ku www.snipca.com/ 23774 wobva wadzvanya 'Tora iyo app' kuti uiise.
Kuti Kodi inoshanda sei
Kana Kodi yangopedza kuisa, tarisa iyo Run Kodi bhokisi wobva wadzvanya Finish kuti uvhure Kodi kekutanga. Kodi ichavhura mune yakazara-skrini modhi. Matongero aunoita Kodi zviri kwauri. Unogona kushandisa mbeva yako, asi tinoona zviri nyore kushandisa cursor uye Enter makiyi. Iwe uchaona yayo interface inonyora mhando dzemukati (Mafirimu, TV Shows, Mimhanzi, nezvimwewo) kuruboshwe (ona skrini pazasi).
Chii chakangwara nezve Kodi ndechekuti inogadzira uye inochengetedza raibhurari yezvako. Kana iwe uchinge wazviudza uko vhidhiyo uye mimhanzi mafaera zvakachengetwa paPC yako, inonyatso kurongedza zvese kwauri. Iyo inongoona mafaera matsva aunowedzera kumaforodha.
Nekuti Kodi inogona kusiyanisa pakati pemafirimu, TV inoratidza uye chero mavhidhiyo awakagadzira zvine musoro kurongedza aya mumafolda akasiyana kutanga. Kuti uite izvozvo, vhura File/Windows Explorer wobva wavhura iyo folda ine yako vhidhiyo mafaera. Gadzira maforodha matatu matsva mukati mayo uye woadaidza kuti Mafirimu, 'TV inoratidza' uye 'Mavhidhiyo angu'. Wobva wadhonza mavhidhiyo ako mune yakakodzera folda.
Kana uchinge wamisa Kodi iwe unokwanisa kuwana zvese zvirimo kuburikidza neyayo huru menyu
Dzvanya iyo RC: Installer link pazasi pe Windows logo kudhawunirodha yazvino vhezheni yeKodi
Wedzera mavhidhiyo kuKodi
Ngatitange nekuwedzera mavhidhiyo ako kuKodi. Dzvanya Vhidhiyo (kuruboshwe), Mafaira, 'Wedzera mavhidhiyo', wobva wadzvanya Bhurawuza. Iwe uchaona rondedzero yenzvimbo iyo Kodi inogona kutamba zvemukati zvevhidhiyo kubva, kusanganisira hard drive yekombuta yako. Kuwedzera yako Vhidhiyo folda kuKodi, semuenzaniso, tinya C:, ipapo Vashandisi, zita rako rekushandisa, richiteverwa neVhidhiyo, wozoti Mamuvhi, 'TV inoratidza' kana 'Vhidhiyo Yangu' folda yawakagadzira kare (ona skrini kurudyi) uye tinya OK. . Iwe zvino uchaona 'Wedzera vhidhiyo sosi' skrini inoratidza nzira yauchangobva kusarudza. Nyora zita remidhiya sosi (ichave Vhidhiyo nekukasira), wobva wadzvanya OK kuti uwedzere iyo sosi.
Kana iyo folda ine mavhidhiyo ako ikatadza kuoneka mushure mekudzvanya Bhurawuza (izvi zvinogona kuitika, semuenzaniso, kana ukachengeta mavhidhiyo ako paNAS drive), tinya 'Wedzera network nzvimbo'. Tevere, nyora IP kero yeNAS yako kana vhidhiyo server, wobva wadzvanya OK. Iwe zvino wave kukwanisa kutarisa uye kuwedzera mavhidhiyo kubva kune aya masosi.
Taura dhairekitori raunoshandisa kuchengeta mavhidhiyo, wobva waripa zita rekuti Kodi ishandise
Kana uchinge wawedzera folda, uchaona nyowani pop-up bhokisi kwaunogona kusarudza (kubva kuMumhanzi, TV Shows, Mafirimu kana Hapana) rudzi rwefaira rawakawedzera. Sarudza mhando inoenderana nefolda yawakawedzera wobva wasarudza OK (ona skrini iri pamusoro). Dzvanya Hongu kuti uvandudze zvese zvirimo. Kana iwe uchigara uchiwedzera mavhidhiyo matsva kuPC yako zvakakodzera kuti Kodi itarise zvitsva zvemukati pese paunovhura. Kuti uite izvozvo, tinya Settings (iyo cog icon pachiratidziro chaunoona paunotanga kuvhura Kodi), Media Settings, wobva wachinja iyo 'Gadziridza raibhurari pakutanga' slider (muchikamu cheVhidhiyo Library) kuti ubatidze.
Tamba mavhidhiyo ako
Zvinotora Kodi chinguva chidiki kuti utarise zvese izvo zvawawedzera. Kana zvangoita izvi, yako huru menyu sarudzo dzichave nevanhu. Sarudza Zviratidziro zveTV, semuenzaniso, uye uchaona runyoro rwemaTV ese awakachengeta, akazara nemifananidzo yezvigunwe. Unogona kutarisa nemhando, zita, gore uye vatambi. Kodi inoteedzerawo kutarisa kwako kuti ikuzivise kuti ndedzipi dzauinadzo uye dzausina kuona.
Sarudza chero mufananidzo wepikicha, uye firimu rakabatana kana TV show ichatanga kutamba. Iwe unogona kushandisa zvidzoreso mubhawa pazasi pechidzitiro kutamba, kumbomira, kudzosera kumashure uye zvichingodaro, uye unogona kudzvanya iyo 'i' icon kuratidza ruzivo nezve vhidhiyo.
Ronga muunganidzwa wako wemimhanzi
Kodi zvakare inoridza mimhanzi, ichikutendera iwe kuwana uye kuridza mimhanzi yako yese kubva panzvimbo imwechete inobatsira. Sezvakaita nemavhidhiyo, ingozvitaurira kwaunochengetera mimhanzi yako uye Kodi icharatidza uye kuronga maalbum nenziyo dzako.
Kusiyana neVhidhiyo tebhu, ine zvikamu zvitatu, iyo Mimhanzi tebhu ine imwe chete. Kutanga kuwedzera maalbum uye mateki, tinya Mimhanzi (kuruboshwe), Mafaira, wozoti 'Wedzera mimhanzi'. Kuti uwedzere maforodha ako emimhanzi kuKodi, tinya Bhurawuza kuti uone ese ako emunharaunda hard drive uye netiweki nzvimbo. Kana Kodi ikatadza kuziva yako NAS kana mamwe maforodha akagovaniswa, sarudza 'Wedzera network nzvimbo', nyora IP kero yemudziyo wako wobva wasarudza OK. Iwe zvino wave kukwanisa kutarisa uye kuwedzera chero nzvimbo dzenetiweki.
Sarudza dhiraivha kana network nzvimbo, wobva waenda kune folda ine mimhanzi yako. Somuenzaniso, uchawana Windows' default Mumhanzi folda nekufamba uchienda C:/ Vashandisi/[zita rako rekushandisa]/Mumhanzi. Kana wangowana folda yaunoda kuwedzera, tinya OK, tumidza iyo folda, wobva wadzvanya OK.
Ridza nziyo mu Kodi
Kodi inoongorora folda yako yemimhanzi uye otomatiki inowedzera yekuvhara art kune ako maalbum
Dzvanya Playlists muchikamu cheMumhanzi kuti ugadzire akawanda playlists sezvaunoda
Kodi ikozvino ichaongorora nzvimbo dzese dzawakatsanangura mimhanzi yako. Kana zvangoita izvi, unokwanisa kuwana maalbum ako uye mateki kuburikidza nemenu huru yeMumhanzi tebhu. Iwe uchaona pikicha yealbum yega yega, ichikuratidza iyo artwork (ona skrini pazasi kuruboshwe). Unogona kutarisa nemuimbi, mhando, nziyo uye maalbum kuti uwane iyo track yaunoda.
Sarudza chero track, uye Kodi ichatanga kuiridza, ichienda kune inotevera track yakanyorwa kana yapera. Kuti uwane zvidzoreso zvekutamba zvizere, wedzera menyu huru, wobva wadzvanya bhatani rekubuda-kunze (skweya ine miseve inonongedza diagonally kunze). Pano, unogona kutamba, kumbomira, kusvetuka uye kumhanyisa-mberi sarudzo yako.
Kuti ugadzire playlist, enda kumenu huru, tinya Mimhanzi, wobva wadzvanya Playlists kubva pane rondedzero yeZvikamu (ona skrini iri pamusoro - ungangofanira kukwenya kurudyi uchishandisa kiyi yemuseve wekhibhodi yako kuti uone bhatani reMazita). Dzvanya 'Itsva yekutamba', wobva watarisa raibhurari yako uye tinya-kurudyi track kana albhamu yaunoda kuwedzera, wobva wadzvanya Wedzera kuisanganisira pane yako runyorwa. Tevere, tinya Sevha, wobva wapa zita rako rekutamba kuti iwe ugone kuzviziva zvakare.
Ona mafoto mu Kodi
Mutariri wemufananidzo waKodi inzira yakanaka yekuratidza mafoto ako edhijitari. Sezvakaita nemavhidhiyo nemimhanzi, Kodi inoita kuti uwedzere maforodha emifananidzo kuraibhurari yayo. Sezvo iwe uchiwedzera mafoto matsva kumaforodha aya, Kodi inogadziridza raibhurari yako, ichikuita kuti utarise mifananidzo mitsva paunongoiwedzera kuPC yako hard drive.
Shandura maratidziro emifananidzo yezvigunwe uchishandisa sarudzo dzeKodi
Kuti uwedzere mafoto ako kuKodi, tinya Mapikicha muchiratidziro chikuru, wobva wadzvanya 'Wedzera mapikicha'. Dzvanya Bhurawuza wobva wawedzera folda (ma) ine mafoto ako sezvawakaita kune yako Vhidhiyo neMumhanzi maforodha.
Kuti utarise mapikicha awakawedzera, tinya Mapikicha mumenyu huru, wobva wasarudza folda yaunoda kuona (iwe unogona zvakare kutsanangura chero mafolda kana iwe uchida kutonga kwakawanda pamusoro pemifananidzo inoratidzwa pachiratidziro). Iwe uchaona rondedzero yezvigunwe zvemifananidzo yako - tinya imwe kuti uione yakazara skrini.
Shandura pikicha yekuona Paunenge uchitsvaga zvigunwe mukati meimwe foto folda, tinya Sarudzo (pazasi pechidzitiro). Pano, unogona kushandura iyo View mhando (maratidziro ezvigunwe). InfoWall ndiyo yedu yatinofarira sarudzo nekuti inoratidza zvigunwe zvakawanda kupfuura iyo default mode, uye inoita kuti usarudze mufananidzo kuti uwane rumwe ruzivo nezvayo, kusanganisira kamera / foni inoshandiswa uye nzvimbo (kana iripo).
Zoom mune chero mufananidzo
Kodi haisi mupepeti wemifananidzo, asi inokutendera kuti uite mamwe mabasa akakosha. Kana uchida kuona zvakawanda pamufananidzo, unogona kushandisa makiyi enhamba (1-9) kuswededza pedyo. Kudzvanya 0 zooms back out uye kunoita kuti mufananidzo wacho ukwane pascreen zvakare. Kana yangoswededzwa mukati, shandisa makiyi emiseve kufamba uchitenderedza mufananidzo.
Kana mufananidzo ukaratidzwa nenzira isiriyo pachiratidziri chako, baya Enter kuti utenderere mufananidzo wacho (wachienderana newachi) ne90 degrees. Iwe unogona kuramba uchibaya kusvikira chifananidzo chave nzira yaunoda.
Kodi inogona zvakare kugadzira otomatiki slideshow yemifananidzo yako. Kubva pane chero folda, tinya Sarudzo, wobva wadzvanya 'Tarisa slideshow'. Iwe unogona zvakare kuvhura foto wobva wadzvanya iyo Spacebar kuti usvetuke muSlideshow Mode kubva pamufananidzo iwoyo.
Kodi inovhura mune yakazara-skrini modhi, zvinoreva kuivhara hakusi nyore sekudzvanya yakajairwa 'X' kumusoro-kurudyi kwehwindo. Pane kudaro, iwe uchaona paine yekudzima icon pane iyo Kodi's main menu screen (ona skrini). Dzvanya iyo kuti uwane iyo Kodi's Power Options menyu. Kubva pano, tinya Buda kuti uvhare Kodi. Pane dzimwe sarudzo, 'Simba off system' inoita kuti udzime PC yako usingasiye Kodi. 'Custom shutdown timer' inoita kuti iwe uise nguva (mumaminitsi) mushure mekunge PC yako yadzima. Kumisa kunoisa PC yako kurara, Hibernate inoiisa mune yakaderera-simba modhi uye Reboot igadzirise zvakare.
Ongorora: kana ukachinja Kodi kuvaka kana ganda (ona mapeji 55 ne56) bhatani rekudzima rinogona kutsiviwa nesarudzo inonzi Rega.
KUKUNZA KODI NEZVIMWE ZVOKUWEDZERA
Kodi haimire pane zviri paPC yako - zvakare inoita kuti utepfenyure vhidhiyo nemimhanzi zvakananga kubva painternet. Kuti uite kudaro iwe unofanirwa kuisa ma-add-ons anowedzera zvitsva kune yakakosha Kodi package. Ma-add-ons akatenderwa anokuganhurira kune zviri pamutemo chete.
Nzira iri nyore yekuisa yekuwedzera ndeyekudzvanya maAdd-ons (kuruboshwe mune main menu skrini) wobva wadzvanya Dhawunirodha (ona skrini pazasi). Iwe uchaona runyoro rwekuwedzera-pane zvikamu zvekusarudza kubva. Bhurawuza kuburikidza neizvi uye tinya ega ma-add-ons kuti uone rumwe ruzivo nezvavo. Kana iwe uchida kudzokera kuchiratidziro chapfuura, tinya madotsi maviri (..) pamusoro peimwe menyu. Dzvanya kiyi Escape kuti udzokere kumenu huru.
Dzvanya Dhawunirodha kuti utarise kuburikidza neKodi akasiyana (uye emutemo) ekuwedzera
Kuisa iyo YouTube yekuwedzera, semuenzaniso, tinya 'Vhidhiyo yekuwedzera' uye wobva wakanda pasi rondedzero kuYouTube. Dzvanya bhatani reInsta (ona skrini pazasi), uye iyo yekuwedzera inozotorwa otomatiki. Uchaona chiziviso kana chaiswa zvinobudirira.
Kuisa yekuwedzera, sarudza kubva pane iyo rondedzero uye wobva wadzvanya bhatani rayo reInstall
Iwe uchawana yako nyowani yekuwedzera muchikamu cheAdd-ons chemenyu huru. Kodi inopatsanura ma-add-ons muzvikamu: Mapikicha, Vhidhiyo, Mimhanzi uye Chirongwa. Sarudza aya madiki-zvikamu kuti uwane yako yakaiswa-yekuwedzera (YouTube ichaiswa muVideo sub-chikamu, semuenzaniso).
Kuwedzera kweNasa kunoita kuti utarise Nasa TV mhenyu uye mifananidzo inovhenekerwa kubva kuISS
Iwo akanakisa Kodi ekuwedzera
Pane zvakawanda imomo, saka tora nguva uchitsvaga izvo zvaunoda. Isu takaisa iPlayer WWW kuti tiwane mukana kune zviri mukati meBBC. Sezvatatoona, YouTube isarudzo huru zvakare.
Isu tiri zvakare mafani eNasa TV yekuwedzera (ona skrini iri pamusoro), inoratidza kubvunzurudzwa kwepamoyo nevazivi vemuchadenga sezvavanotenderera pasirese paInternational Space Station (ISS). TED Hurukuro inokupa iwe kuwana kune zvakarekodhwa ehurukuro pane dzakasiyana nyaya dzepasirese, uku The Guardian's add-on inoita kuti utarise nhau dzemazuva ese.
Kune matani emahara emimhanzi masevhisi ekuwedzera muMumhanzi
chikamu chekuwedzera. Iyo Apple iTunes Podcasts yekuwedzera inofanirwa kana iwe uchiteerera podcasts. Kana iwe uchinakidzwa nekunzwa nezve ichangoburwa bhaisikopo nhau uye wongororo saka Kermode uye Mayo's Firimu Wongororo ndeimwe sarudzo huru. Isu tinoyerawo Radio, yekuwedzera-yemahara iyo inopa mhenyu ezviuru zvenhepfenyuro kubva pasirese.
Chikamu chekuwedzera-chipikicha chakareruka pane zvinonakidza zvemukati. Pane Flickr yekuwedzera asi ine hunyengeri kusungirira muakaundi yako yeFlickr, saka inoita senge injini yekutsvaga yemifananidzo. Mafeni emakomiki mitsetse anozozviwana akanyatso kushandirwa neGarfield yekuwedzera.
Chirongwa chekuwedzera chinopa Kodi nemamwe maficha. Semuenzaniso, Dbmc inopa mukana kune yako Dropbox account. Iwe unogona zvakare kuisa iyo Facebook Media yekuwedzera kuti utarise pasocial
network mifananidzo, nepo Match Center inokupa iwe mhenyu nhabvu zvibodzwa uye matafura.
Izvi zvine akawanda anobatsira ekuwedzera ekuratidza rumwe ruzivo. Unpause Jumpback ichadzosera kumashure mavhidhiyo nemasekonzi mashoma paunenge wambomira kuti usarase chero chinhu, ukuwo Stinger Scene Notification inokuzivisa iwe kana firimu rauri kuona rine chiitiko mushure mekupedzisira makiredhiti (anonzi 'stinger' mu kutengeserana kwemafirimu). Iwe unogona zvakare kuwedzera RSS feeds kuKodi uchishandisa iyo RSS Popus yekuwedzera. Kana yangoiswa dzvanya Addons, 'My add-ons', Services, RSS Popus, wobva wagadzirisa. Dzvanya RSS Feed Wedzera kuti uwedzere chikafu. Nyora feedsbbci.co.uk/news/ rss.xml kuwedzera BBC World News, semuenzaniso.
Pano unogona kudhawunirodha ma-add-on anoratidza mamiriro ekunze.
Zvatinofarira ndeye OpenWeatherMap Yakawedzerwa. Tinya kuti uiise, wobva wadzvanya zvakare wodzvanya Configure. Dzvanya Nzvimbo 1 uye nyora nzvimbo yako, wobva wadzvanya OK kaviri, wozoshandisa. Dzvanya Escape kuti udzokere kuMenu main menu uye tinya Weather kuti uone mamiriro ekunze. Kuti uchinje kubva ku ° F kuenda ku ° C, tinya chiratidzo checog, 'Interface settings', Dunhu,'Region default format' wozosarudza'UK (12h)'. ►
Ko Kodi zviri pamutemo here?
Mushoko rimwe: hongu. Kodi pachayo iri pamutemo zvachose uye yemahara, uye hapana zvirango zvekurodha nekuishandisa.
Izvo zvisiri pamutemo, maererano nedzimwe tsananguro dzemutemo, kugadzira yekuwedzera-yakagadzirirwa kutepfenyura masevhisi ekutanga (izvo zvakafanana zvemukati zvaunowanzo bhadhara paNetflix, Amazon Prime, Sky uye BT). Kodi inozvibvisa zviri pamutemo kubva kune aya maaddon, asi haigone kuvamisa kugadzirwa.
Pane kana mubvunzo wekuti kutenderera kwakabhadharwa-zvemukati hakusi pamutemo. Mumutongo unokosha wakapiwa muna 2014, Dare Rezvemitemo reEuropean Union rakapa mutongo wekuti kutepfenyura zvinhu zvine kodzero kwete kutyora mutemo. Kudimikira mutongo, zvinopa zano kuti kutepfenyura (nemunhu) hakusi pamutemo, nekuti unongochengeta diki, kopi yefaira renguva pfupi. Zvakadaro, ivo vane kodzero dzekodzero - seFox, Netflix neAmazon - vanoda Kodi-akawedzera kurambidzwa uye vari kurwisa mutongo wese kuti zvidaro.
Zano redu nderekuti kana zvimwe zvirimo muKodi zvichiita kunge zvakanyanyisa kuti zviite chokwadi ipapo, zvakanakisa, hazvina kunaka kuzviona, kana zvisiri pamutemo (zvirinani izvozvi).
Mamwe ma-Kodi ekuwedzera anotendera iwe kuti uwane mazana emafirimu neTV anoratidza, zviri pamutemo kana kwete
Kana iwe ukateedzera matanho ekuisa akagadziridzwa anovaka pazasi, iwe unozokwanisa kuona muenzaniso wemamwe eKodi anonyanya kukahadzika ekuwedzera iwe pachako.
KUGADZIRA KODI NEZVIVAKA
Adda yakagadzirirwa kuvaka
Kodi's default menu uye chitarisiko chakatsamira pazvinhu - saka unofanirwa kuisa ma-add-on aunoda. Nekudaro, iwe unogona kuishandura uchishandisa iyo inozivikanwa se 'kuvaka', iri pre-yakagadzirwa paki yemaaddon. Pano isu tinokuratidza maitiro ekuisa yakakurumbira kuvaka inonzi Apollo.
Usati waisa nyowani Kodi inovaka iwe unozoda kugonesa kumisikidza kubva kune isingazivikanwe masosi. Dzvanya Settings, 'System marongero' uye sarudza maAdd-ons. Tarisa iyo 'Unknown sources' yekupinda uye fambisa inotsvedza kurudyi (ona skrini pazasi). Dzvanya Hongu kana wakurudzirwa.
Fambisa iyi inotsvedza kuti ubvumire Kodi kuisa chero chivakwa chaunoda
Kana wapedza izvozvo, tinya Settings (iyo giya icon pane iyo huru menyu), ipapo File Manager. Dzvanya 'Wedzera sosi' (kuruboshwe), wodzvanya kaviri Hapana uye nyora http://repo.ares-project.com/magic, wobva wadzvanya Enter. Ipa media sosi zita (takasarudza Apollo) uye tinya OK (ona skrini kumusoro kurudyi).
Iye zvino watora iyo Apollo kuvaka iwe unofanirwa kuiisa. Dzokera kune main menu sikirini wobva wadzvanya Add-ons (muchikamu kuruboshwe). Dzvanya bhokisi icon kumusoro kuruboshwe (ona skrini kurudyi), wobva wadzvanya 'Isa kubva zip faira'. Dzvanya kaviri pane Tsime rauchangobva kutumidza (Apollo mune yedu kesi), wobva wadzvanya repository. aresproject, ipapo 'repository.aresproject'
Usati wawedzera chivakwa chekuvaka, unofanirwa kuudza Kodi pane iyo yekuisa faira
zip uye pakupedzisira OK. Tevere, tinya MaAdd-ons, chiratidzo chebhokisi (kumusoro-kuruboshwe), 'Isa kubva pane repository', Ares Project, 'Program addons', Ares Wizard uye wozoisa.
Zvino dzvanya kiyi yeEscape kakati kuti udzokere kuchiratidziro chemenu uye tinya MaAdd-ons, 'Program add-ons', wobva wadzvanya kaviri Ares Wizard. Dzvanya OK kana wakurudzirwa. Iyo Ares Wizard (ona skrini kumusoro kurudyi) ichavhura mushure memasekondi mashoma. Kana zvikasadaro, dzvanya kutiza zvakare kuti udzokere kumenyu huru, asi panguva ino isa cursor pamusoro peZviwedzere uye wobva wadzvanya bhatani reAres Wizard. Zvakare, mira zvishoma.
Zvadaro, mukati meAres Wizard, tinya Bhurawuza Zvivakwa (kumusoro kuruboshwe) uyezve Apollo. Dzvanya Tora PIN (ichaita kuti browser yako ivhure) woinyora pasi, wobva wadzvanya Enter PIN woinyora. Wobva wadzvanya
Kuti uise tsika yekuvaka, tinya maAdd-ons kubva pane huru menyu, wozotevera iyi bhokisi icon
Kana ukangoona Ares Wizard, unenge watosvika. Dzvanya Bhurawuza Zvivakwa kuti uise Apollo
Install. Kana kuiswa kwapera iwe unozokurudzirwa kuvhara Kodi. Kana yangovharwa, vhura Kodi zvakare uchishandisa icon yayo mune yako Start menyu uye uchaona kuti inotaridzika zvakasiyana - iyi ndiyo Apollo kuvaka (ona skrini pazasi).
Apo Apollo payakazara, rega kusaina chero zvikumbiro zvekusaina wobaya Kanzura kuti udzinge mameseji. Iwe unogona zvakare kufuratira chero kukanganisa meseji. Uri nani pakudzora Apollo uchishandisa makiyi emiseve pakiibhodhi yako. Semuenzaniso, rova ​​​​museve wekuruboshwe kusvika TV Shows iri pakati pechidzitiro chako, wobva wadzvanya Enter. Iwe uchaona marudzi ese ezvekuwedzera akanyorwa (uye nezvimwe kana iwe ukabhuroka pasi uchishandisa museve wepasi pakhibhodi yako). Mamwe, akadai seBBC iPlayer, ITV uye YouTube, akakwana
Kuti utarise maadd-ons eApollo, shandisa makiyi emuseve pakhibhodi yako
Ekisodho inosanganisira zvese zvaungawana paPlayer, ITV Hub uye All4- asi inowedzera zvimwe zvisiri pamutemo.
Kana ukangosarudza chimwe chinhu chekutamba iwe unofanirwa kusarudza sevha, seYMovies kana PutLocker
zviri pamutemo. Vamwe vane musanganiswa wezvemutemo uye zvine kodzero. Semuenzaniso weizvi, simbisa uye tinya Exodus (ona skrini iri pamusoro) uchishandisa makiyi ecursor uye wodzvanya Enter. Kana Ekisodho yangovhurwa shandisa makiyi ecursor kuratidza TV Shows, wobva wadzvanya Enter. Fambisa nzira yese kusvika kuzasi kwesarudzo dziripo dzeKutsvaga uye nyora Broadchurch, semuenzaniso, wobva wadzvanya Enter. Sarudza Broadchurch kubva pane rondedzero yezvabuda, wozotevera Season 3, uye uchaona zvikamu zviripo. Dzvanya imwe uye mirira kwemasekonzi mashoma kuti runyoro rwemaseva aoneke. Dzvanya sevha (YMovies kana PutLocker ese ari maviri sarudzo dzakanaka - ona skrini kumusoro kurudyi) kutanga vhidhiyo.
Unogona kutsvaga chero chinhu nenzira iyi, kana kutarisa zvirimo nekuzivikanwa. Kuti uite kudaro, tinya museve unodzokera kumashure pamusoro pe Broadchurch episodhi nguva shoma kuti udzokere uye tinya Yakanyanya kufarirwa kuti uone mashoma ezviratidziro zveTV zviripo. Uchadaro
Ganda rega rega reKodi rine tsananguro pfupi, asi nzira yakanakisa yekuona kana iwe uchida imwe ndeyekuyedza
ona kune mazana emashoo akanyorwa. Vamwe, senge Broadchurch, anowanikwa zviri pamutemo pakubata-up TV masevhisi (senge iPlayer neITV Hub), saka hapana tsika yegrey nzvimbo yekunetsekana nayo. Asi mamwe anowanikwa chete payakabhadharwa- yeTV masevhisi seNetflix. Kuona izvi, vanhu vazhinji vangati hazvina kunaka, uye vamwe vangati hazvisi pamutemo.
Asi izvo hazvina kumisa mamirioni avanhu kutepfenyura zvirimo zvine copyright kuburikidza neKodi. Kuti udzoke kune main interface yaApollo, dzvanya kiyi yekutiza. Kuvhara Apollo, skira kuKusiya pane yayo huru interface uye rova ​​​​Enter kiyi.
Shandura ganda raKodi
Kana iwe ukadzikisirwa nekuoma kwekuisa chivakwa, saka kushandura ganda rako reKodi inzira isina kusimba yekuchinja chitarisiko chayo. Zvakafanana nekuchinja Wallpaper yako pane yako Windows desktop - inoshandura chitarisiko uye manzwiro, asi inochengeta maficha akafanana.
Kuisa ganda idzva, tinya Settings (iyo cog icon) mumenyu huru, Interface, ipapo iyo Ganda sarudzo (iyo yekumisikidza ndiyo Estuary). Dzvanya bhatani rekuti 'Tora zvimwe' uye uchaona rondedzero hombe yematehwe ese aripo. Ingosarudza yaunoda uye
Isu takawana iyo Xperience1080 ganda kuve rakanyanya mushandisi-ane hushamwari kupfuura kusarudzika kwaKodi
Kodi ichaidhaunirodha. Zvino dzokera kuGanda sarudzo uye sarudza yako Ganda yakarodha kubva pane huru runyorwa kuti uiise.
Kodi matehwe kuti akutange iwe
Izvi zvinoshandura Kodi's interface, ichiita kuti ive panel-based (ona skrini iri pamusoro) saka zviri nyore kunzwisisa - kutaura zvazviri, zvinoyeuchidza Windows Tanga menyu.
Aeon Nox haisi yakawanda yemutoro pane yako system uye inofanirwa kumhanya zvakanaka kunyangwe pamaPC mazhinji, zvisinei nekumhanya kwavo.
Iri ganda rinogona kusatarisisa kunakidza, asi rakareruka, uye riri nyore kuverenga. Mameseji akapinza uye akajeka apo mamenu ekufambisa ari kukurumidza - kunyangwe pamaPC anononoka.
Filed Under: Technology News Tagged With: Kodi Addon, Kodi App, Kodi Extension, Kodi Install, Kodi Roku, Kodi Skin, Kodi Smart Tv, Kodi Streaming, Vadivelu Comedy Tv Addons